MR.COP मास्टर 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
अघिल्लो खेल: बेलायती ..
अर्को खेल: सुपर टेट्रिस
१. ती सबैलाई नष्ट गर्नुहोस् र विश्व बचत गर्नुहोस्! MR.COP मास्टरको गोप्य मिशन छ। खराब घातक व्यक्तिलाई बाहिर राख्न तपाईंको घातक शुद्धता र सटीकता प्रयोग गर्नुहोस्! यो एक जासूस, एजेन्ट, एक ज़ोम्बी, लम्बरजेक, एक विदेशी हो, तिनीहरू सबै यहाँ छन् संसारको कब्जा गर्न र केवल एक मास्टर मात्र तिनीहरूलाई नष्ट गर्न र संसार बचाउन सक्छ। २. महाकाव्य मिशनहरू अनलक गर्नुहोस् तपाईलाई हटाउन यति धेरै शत्रुहरू र स्तरहरू, प्रत्येक यसको आफ्नै अनोखी मोडमा! तिमी कत्तिको चतुर छौ? के तपाईं सबै पजलहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? बुलेटहरू शूट गर्नुहोस् जुन बाउन्स, बाउन्स, वा केवल सीधा जानुहोस्। तपाईंको बुलेटहरू प्रयोग गर्नुहोस् वस्तुहरू खस्दा र विस्फोट गर्न। चेन प्रतिक्रियाहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको लक्ष्य प्राप्त गर्न यसले लिने जे पनि गर्नुहोस्!
# शुटरशटहरूमोबाइलपुलिसवालाआरा पजल